Gingilchaa ol'aanaa qinddeessa.
Ulaagaalee gingilchaa dubbisi kanarraa
Hammanga moggaafame fili, ykn hammangaa man'ee ulaagaalee itti fayyadamuu barbaaddee of keessaa qabu galchi.
Filannoowwan gingilchaa dabalataa agarsiisa.
Yommu deetaan gingilchamu qubee xixiqqaa fii qubee gguddaa addabaasa.
Hammangaan moggaasa tarjaa qaba
moggaasa tarjaa hammangaa man'ee tarree tkkoffaa dabalata.
Bu'aawwan garagalchi gara
sanduuqa filannoo fili,itti aansuun hammangaa man'ee iddoo firiiwwan gingilchaa itti agarsiistu fili. Akkasumas hammangawwan moggafaman tarree keesaa filuu ni dandeessa.
Hiika gingilchaa kessatti akka turbaawwan abbaalaa fayyadamtu eeyyama. Tarree himannoowwan idilee LibreOfficen gargaaru argachuuf, here cuqaasi.
Yoo sanduuqni Himannoowwan Idileefilatame, yoo sanduuqni tarree '=' EQUAL ykn '<>' UNEQUAL tin qindaa'e himannoowwan idilee fayyadamuu danddeessa.
Deetaa gingilchame keessaa bayyisuu tarreewwan tokkoffaa hin dabalatu.
Ulaagaalee gingilchaa kaa'i
Sanduuqa filannootti firiwwan gargalchi fili,itti aansuun hammangaa ga'umsaa bakka deetaa gingilchame itti agarsiisuu barbaaddee ifteessi.Yoo sanduuqni kun mirkaneeffame,hammangaan ga'umsaa hammangaa maddaatti kornyatee tura.Hammangaa maddaa Deetaa - Hangii hiikaa jalaa jiran akka hammangaa kuusaa deetaatti qindeessuu qabda. Kanatti fufuun,yeroo kamiyyuu gingilchaa qindaa'e akka armaan gaditti dabaldhiyeeffachuu dandeessa: hammangaa maddaa cuqaasi,irraan Deetaa - Hangii Haaromsi fili.
Irraantota sarjaa hammangaawwan wardii gara bal'ina duwwaa wardiitti garagalchi, achiin ulaagaa gingilchaaf tarree jala irraantota keessatti galchi. Deetaan dalga qindaa'an tarree keessatti yaayaa FI wajjin hoggayyuu walitti hidhamu, deetaan irraan gadee sarjaa keessatti hoggayyuu yaayaa YKN wajjin hoggayyuu walitti hidhamu.
Wardii tarreewwan baay'ee qabate fe'adhu. Galmee Turnover fayyadamaa jirra, garuu galmee biraa kamiyyuu salphaatti fayyadamuu dandeessa. Galmeen teessuma armaan gadii qaba:
Tarree 1 irraantota tarree wajjin(maqaalee dirree), gara tarree 20,fakkeenyaaf garagalchi. Haalleen gingilchaa kan tarreewan 21,22, fi kkf tti geessan ykn keessaa galchi.
Gingilcha ufmaa raawwachuu
Title is: Gingilchaa ol'aanaa